lic nepal(lic nepal) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
एलआईसी नेपालको वार्षिक साधारणसभा फागुन २५ मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी नेपाल) लिमिटेडले आफ्नो १८ औँ वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो फागुन २५ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। सभा काठमाण्डौको नक्सालस्थित एलआईसी शिक्षालय हलमा बिहान १०ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि प्रस्तावित कुल...
काठमाण्डौ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल(एलआइसी नेपाल)ले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको बुधबार अपरान्ह बसेको संचालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि हाल कायम चुक्तापूँजीको १०.५२६३ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । हाल यो कम्पनीको चुक्तापूँजी २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसकै १०...
काठमाण्डौ । रु. १ करोडको जीवन बीमा गराएका एक व्यक्तिको २६ दिनमै मृत्यु भएको छ । मृत्युको २६ दिनअघि मात्रै बीमा गराएका कारण ती व्यक्तिको मृत्युपछि परिवारले १ करोडको दाबीभुक्तानी पनि पाउने भएका छन् । अनिश्चित जीवनमा बीमाले कति ठूलो महत्व राख्छ र बेलैमा बिमा गरे आफ्नो मृत्युपछि आफ्ना प्रियजन र परिवारले कसरी राहात पाउनसक्छन् भन्ने उदाहरण...
काठमाण्डौ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन(एलआइसी नेपाल) लिमीटेडको विषयमा आएका समाचारहरुको सो कम्पनीले खण्डन गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले एलआइसी इण्डियासँग नेपालको कम्पनीलाई जोडेर गलत तथ्यको आधारमा नियतवश समाचार प्रकाशन भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । ‘एलआईसी इण्डिया र एलआईसी नेपालको बिषयमा गलत तथ्यको आधारमा...
एलआइसी नेपालद्वारा ७०% को बम्पर लाभांश घोषणा
काठमाण्डौ । लाइफ इन्स्योेरेन्स कर्पोरेसन नेपाल(एलआइसी नेपाल)ले बम्पर लाभांश वितरणको घोषणा गरेको छ । यो कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई ७० प्रतिशत लाभांश वितरणको घोषणा गरेको हो । कम्पनीको ९९ औं बोर्ड बैठकले ३४.४६२६ प्रतिशत बोनस सेयर र ३५.५३७३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको निर्णय गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वित्तीय विवरण कम्पनीको...
काठमाण्डौ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेडको संचालक समिति बैठकले जेठ २ गतेदेखि लागू हुने गरी एमआर कुमारलाई अध्यक्षमाा नियुक्त गरेको छ । यो नियुक्तिअघि हेमन्त भार्गवले यस बीमकको संचालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए । नवनियुक्त अध्यक्ष एम.आर. कुमार एलआईसी अफ इण्डियाको बर्तमान अध्यक्ष समेत हुन् ।...
नौ महिनामा एलआइसी नेपालद्वारा रु. ८.७९ अर्ब प्रिमियम संकलन, जीवनबिमा कोष झनै मजबुत
काठमाण्डौ । एलआइसी नेपालले प्रिमियम संकलनमा २६.४२ प्रतिशतको फड्को मारेको छ । यो कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म ८ अर्ब ७९ करोड प्रिमियम संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ६ अर्ब ९५ करोडमा सीमित थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले १० करोड ७१ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ९ करोड ९८ लाख नाफा...
एलआइसीको धनवृष्टि योजनाको कमाल: पहिलो दिनमै ८.५ करोड प्रिमियम संकलन, रच्यो इतिहास
काठमाण्डौ । एलआइसी नेपालको नयाँ जीवन बिमा पोलिसी धनवृष्टिले नयाँ इतिहास रचेको छ । कम्पनीले एक विज्ञप्ति जारी गरी धनवृष्टि स्किमले ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको दाबी गरेको हो । धनवृष्टि पोलिसी बिक्रीमा आएको पहिलो दिन नै ५ हजार १२२ पोलिसी बिक्री भएको हो । कम्पनीले यो स्किम अन्तर्गत पहिलो दिन नै ८ करोड ५० लाख प्रिमियम संकलन गरेको छ...
एलआइसी नेपालले ल्यायो नौलो बिमा योजना, प्रत्येक ३ वर्षमा धनको वृष्टि हुने !
काठमाण्डौ । “जीवन बीमाको साथमा, धनवृष्टि ३–३ वर्षमा” भन्ने सन्देशका साथ एल.आई.सी. नेपालले ‘धनवृष्टि’ नामक जीवन बीमा योजना बजारमा ल्याएको छ । नया“ वर्ष २०७६ को अवसर पारेर कम्पनीले आयोजना गरेको एक समारोहबीच उक्त ‘धनवृष्टि’ योजनाको अनावरण बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईंले गरेका हुन् । १३ देखि ६० वर्षसम्म उमेरका...
एलआइसी नेपालको सीइओमा लक्ष्मीप्रसाद दास नियुक्त, २६ वर्षे लामो अनुभव
काठमाण्डौ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन(नेपाल) लिमिटेडको सीइओमा लक्ष्मीप्रसाद दास नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको ९७औं संचालक समिति बैठकले माघ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संचालकको रुपमा लक्ष्मीप्रसाद दासलाई नियुक्त गरेको हो । उनको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ । यो नियुक्तिअघि बीमकका नायब महाप्रबन्धक अभिजित घोष...
काठमाण्डौ । एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेडले लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेडसँग बैंकास्योरेन्स सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौताअनुसार अब यस बैंकका ग्राहकहरुले मुलुकभर फैलिएका २६५ वटै शाखाहरुबाट सहज रुपमा लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेडको जीवन बीमा पोलिसीहरु खरिद गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यस सम्बन्धी...
एलआइसी नेपालले धोका दियो सेयरधनीलाई, ३६% लाभांशको लोभमा लगानी गर्ने फसे
काठमाण्डौ । लाइफ इन्स्योेरेन्स कर्पोरेसन(नेपाल) लिमीटेडको आकर्षक लाभांश प्रस्तावमा सेयरमा लगानी गर्नेहरुले धोका खाएका छन् । यो कम्पनीले यसअघि २०७३/७४ को मुनाफाबाट लगानीकर्तालाई ३६ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि १.८९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको निर्णय गरेको थियो । तर, एलआइसीको यो प्रस्ताव बिमा समितिले...
एलआइसी नेपालले मनायो १७ औं स्थापना दिवस
काठमाण्डौ । एलआईसी अफ इण्डियाको संयुक्त लगानीमा संस्थापित जीवन बीमा कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल(एलआईसी नेपाल)ले स्थापनाको १७औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । सन् २००१ को सेप्टेम्बरमा व्यवसाय शुरु गरेको एलआईसी नेपालले देशभरका सवै शाखा कार्यालयमार्फत विविध कार्यक्रम गरी १७औं वार्षिकोत्सव मनाएको हो । जीवन बीमामा...
‘लङटर्मका लागि एलआइसीमा लगानी गर्नेलाई हामी निराश बनाउनेछैनौं’
-अभिजित घोष दस्तिदार(अफिसिएटिङ सीइओ)-एलआइसी नेपाल बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुका लागि समयसीमासहित चुक्तापूँजी तोकेको छ। तपाईहरु पनि त्यो दौडमा हुनुहुन्छ, अवस्था के छ ? -हाम्रो अहिलेको चुक्तापूँजी १ अर्ब ३४ करोडको हाराहारीमा छ । केही समयअघि हामीले २०७३/७४ को मुनाफाबाट ३६ प्रतिशत बोनस सेयर घोषणा गरेका छौ र कर प्रयोजनका लागि आवश्यक नगद...